Semalt Expert - Ahoana no Hanombohana Blog malalaka amin'ny WordPress.com
WordPress.com no maimaim-poana sy iray amin'ireo sehatra fitorahana bilaogy tsara indrindra amin'ny aterineto. Eto dia afaka mametraka mora foana ireo lahatsoratra sy lahatsoratra ianao, saingy tsy azo atao ny pôrnônaly, ny pharmacy, ary ny lohahevitra mifandraika amin'ny filokana na ny niches. Mazava ho azy, ny olona samihafa dia manomboka manomboka ny fialambolan-blaogy avy eto, fa ny ankamaroan'izy ireo kosa dia manohy mankany amin'ny sehatra karama ary manomboka mampiasa ireo safidy manokan-tena. Ny Wordpress.com dia mamela ireo mpampiasa azy hahazo tombony amin'ny safidy malalaka bilaogy. Midika izany fa tsy voatery handoa onitra na faritra ianao. Raha fintinina, ianao dia mitoraka blaogy ho an'ny tranonkala azo atolotra ary afaka mametraka ny marikao tsy mila mandoa zavatra.
Michael Brown, manam-pahaizana ambony indrindra avy amin'ny Semalt , dia manome ohatra sasantsasany amin'ireo bilaogy izay nampiantranoina tao amin'ny sehatra wordpress.com:
Ahoana no hanombohana blôgy malalaka amin'ny wordpress.com?
Raha toa ianao ka misafotofoto ny fomba hanombohana ny bilaogy wordpress.com maimaim-poana, tsy maintsy mamaky ity torolalana ity ianao
1. Mifidiana ny fananganana ny tranokala:
Ny zavatra voalohany tokony hataonao dia ny mifidy amim-pahendrena ny layout homepage. Raha manao izany ianao dia tokony ho azonao antoka fa ny layout dia toy ny ao amin'ny najin'ny bilaoginao sy ny foto-kevitrao. Ohatra, raha manana raharaham-barotra ianao ary te-hampiroborobo ny marika amin'ny blaogy Wordpress.com, tokony hifidy ny layout izay manome ny blôginao fijery manintona sy matihanina. Toy izany koa, misy loha-hevitra marobe sy sarin'ireo tranonkala sary, ary ireo mpaka sary profesora dia afaka misafidy ny iray amin'ireto safidy ireto mba hananganana bilaogy malalaka amin'ny wordpress.com..Noho izany, mila miditra fotsiny amin'ny wordpress.com ianao ary fidio ny layout alohan'ny handehanana mankany amin'ny dingana manaraka.
2. Mifidiana Theme:
Tahaka ny wordpress.org, wordpress.com dia manana lohahevitra marobe maromaro hifidy. Ny lohahevitra dia ny endriky ny tranokalanao na ny blôginao. Tokony hifidy amim-pahendrena ny foto-kevitra ary azonao antoka fa miresaka momba ny marikao izy. Azonao atao ny manova ny lokon-java-maniry, ny famerana ny widgets ary ny menus, ary mampiditra sary raha vao nofantenana ny lohahevitra. Mandehana any amin'ny lohahevitra Option Theme mba hifidianana ny lohahevitry ny faniriana.
3. Fidio ny domy (adiresy ao amin'ny blôginao na anarana) :
Tsy maninona, sarotra ny mahita sehatra miavaka sy miavaka ao amin'ny wordpress.com satria ny fifaninanana dia tena ambony. Ny vintana dia ny efa nalaina teo amin'ny sehatra nofidiana, saingy tsy mila manahy ianao raha afaka manandrana karazana sehatra hafa ary mijery ny famandrihana an-tserasera. Raha mijery ny fividianana ny sehatra ianao, ny wordpress.com dia tsy tokony ho safidinao satria ny anaran-toerana amidy eto dia tena lafo.
4. Safidio ny drafitra:
Rehefa voafidy ny anaran'ilay sehatra, ary nahavita ny dingana fototra ianao, ny dingana fahefatra dia ny hanangona ny drafitrao. Amin'ny voalohany, tsy afaka mandoa vola amin'ny blôginao ianao, noho izany dia tokony tsindrio ny safidy Select Free ary manomboka. Ireo mpampiasa tsotra dia tsy mila misafidy ireo volavolan-karama satria efa lafo be ary tsy manome tombontsoa betsaka araka izay ilainao.
5. Mamorona kaonty:
Tokony hampiasa ny imailaka imailaka voalohany ianao hamoronana kaonty. Ny ankamaroan'ny mpampiasa dia mampiasa Gmail sy Yahoo IDs ho an'ity tanjona ity. Tokony hifidy amim-pahendrena ny anarana sy ny tenimiafina. Ataovy azo antoka fa manana tenimiafina toy ny "^^" sy "/ & #" ny tenimiafinao mba tsy ho tapaka ao amin'ny bilaoginao ny hackers. Raha vao namoaka ny lahatsoratra voalohany ianao dia aza adino ny mizara izany amin'ny media sosialy mba hahalalan'ny olona bebe kokoa ny fahaizanao hanoratra.
Ny fomba mora hamoronana lahatsoratra vaovao na pejy dia ny fampiasana ny "Post" -> "New" safidy na "Pejy" -> "Add New" safidy.
Raha nanapa-kevitra ny hamorona blôgy amin'ny sehatra manokana ianao dia tsy tokony hiditra amin'ny wordpress.com fa wordpress.org Source .